Sii hayaha Ra’iisul Wasaaraha Dalka oo Xariga ka jaray Machadka sare ee daraasaadka amniga+Sawirro - Hargeele - Wararka Somali State
Muqdisho-(SONNA)-Sii hayaha Ra’iisul Wasaaraha Dalka, mudane, Mahdi Maxamed Guuleed ayaa xarigga ka jaray machadka sare ee daraasaadka amniga oo ah hay’ad talciin sare oo Dowladdu leedahay.
Ujeeddada machadka loo aasaasay ayaa ah kobcinta heerka aqooneed, midka xirfadeed, ogaalka xubnaha laamaha amniga ee Dowladda, iyo in hoggaanka sare ee Dalku ay helaan talo bixin iyo gorfeyn cilmiyeysan oo ku saabsan amniga Qaranka.
Mudane, Mahdi Maxamed Guuleed, waxuu sheegay in furitaanka machadkaan ay ka dhigantahay tallaabo weyn oo loo qaaqay hagaajinta amniga Dalka.
Dowladda ayaa dedaal dheeraad ah gelisay horumarinta amniga Dalka, waxaana guul weyn laga gaaray dib-u-habeynta qeybta amniga Dalka.
Arrintaas ayaa sahashay in degaanno badan oo Argagaxisadu ay Dadka ku dhibaateyn jirtay dib loogu soo celiyay gacanta Dowladda, kuna soo laabatay noloshii caadiga aheyd ee Bulshada.
Ciidanka xoogga Dalka Soomaaliya oo dilay hor-jooge ka tirsanaa Al-Shabaab
Maamulka Dhusamareb oo bilaabay qorshe lagu soo celinayo bilicda caasimada Galmudug